मोटर वातानुकूलित - कार मा एक धेरै उपयोगी कुरा। यो तातो गर्मी दिनमा सुन्दर हावा हामीलाई प्रदान गर्दछ। वास्तवमा, कार हावा रूपमा यसको घरेलू समकक्षों रूपमा विश्वसनीय। तर, त्यो कहिले काँही नियमित निदान, सफाई र सर्द शुल्क आवश्यक छ। उत्तरार्द्ध प्रक्रिया त्यसैले, विशेष उपकरण र विशेषज्ञता आवश्यक छ, सबैभन्दा जटिल र समय खपत छ। तथापि, यस कंडीशनर भर्न स्वतन्त्र भएको ग्यारेज अवस्थामा हुन सक्छ।
किन सर्द evaporates?
यो कठिन यो घटना व्याख्या छ। बस यो संचालित जसमा अवस्था सम्झना। स्थिर कम्पन र तापमान परिवर्तन सर्द को प्राकृतिक वाष्पीकरण को मुख्य कारण हो जो प्रणाली, भर उपकरण र जडानहरू असर गर्छ। साथै, वातानुकूलन घरेलू विभाजित प्रणाली भन्दा बढी माटो धेरै पटक अवशोषित। यो सबै निकै यसको सेवा जीवन कम गर्छ।
जब हावा कंडीशनिंग भर्न?
यो प्रक्रिया PERIODICITY बिना गर्न सकिन्छ। नियम, हाम्रो कार मालिक शुल्क मात्र प्वालहरू वा यसको पूर्ण अभाव सर्द। स्वाभाविक यो तथापि, निर्माता यसलाई पूर्ण रकम मा सिस्टम मा उपस्थित पनि भने, हरेक वर्ष यो भर्न सिफारिस, केही वर्ष वाफ बन्नु गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ कार मा 2-3 वर्ष मा एक पटक अभ्क तेल हाल्नु गर्न सिफारिस गरिएको छ। लागि पुरानो कार 8 वर्ष भन्दा पुरानो हरेक 10-12 महिना अभ्क तेल हाल्नु गर्न सिफारिस गरिएको छ।
स्वतः वातानुकूलन भर्नु आफ्नै हातले
पहिलो चरण उपकरण पदार्थ को निकासी कसरी कार्य र पछि प्रयोग गरिनेछ कि बाहिर आंकडा छ। हावा कंडीशनर, आपतकालीन इन्धन भर्ने आवश्यक काम गर्न सुरु पक्का।
को सर्द प्रणालीबाट आफूलाई निकाल्न सुरु गर्न। कि पछि, हामी आवश्यक हावा कंडीशनर निदान कार लीक। यो गर्न, प्रणाली एक निर्वात सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, यो अतिरिक्त हावा, चिस्यान र उच्च यांत्रिक अशुद्धताओं हटाइएको छ। आफ्नै हात संग इन्धन भर्ने स्वतः वातानुकूलन पछि प्रणालीमा स्नेहक र additives को इंजेक्शन सँगसँगै छ। यो एक विशेष फ्रिज तेल, जो, प्रसंगवश पनि संचालन र हावा कंडीशनर समयमा नष्ट गर्ने क्षमता छ लागू गर्नुपर्छ। एयर कंडीशनर अर्को आफ्नो हात, सफल Refill कंडीशनिंग सर्किट पुनःभरिएको र सिस्टम मा दबाव जाँच गर्नुहोस्। को सर्द र रेफ्रिजरेटर तेल भर्नु महिनामा निर्माताको सिफारिसहरू संग सख्त अनुसार थप गर्नुपर्छ।
यो चरण मा, छलफल गर्न सकिन्छ आफ्नै हातले स्वतः वातानुकूलन अभ्क तेल हाल्नु कसरी प्रश्न बन्द। यी काम अन्त्यमा, विशेषज्ञहरु पनि सफाई जीवाणुरोधी प्रणाली उत्पादन सिफारिस गर्छौँ। कि पछि, आफ्नो वातानुकूलन नयाँ रूपमा राम्रो हुनेछ। यसरी, प्रणाली कम्तिमा एक वर्ष सञ्चालन हुनेछ।
अब तपाईं कसरी आफ्नो हातमा स्वतः वातानुकूलन अभ्क तेल हाल्नु थाहा।
को "कैडिलैक" र प्रतीक को घटना को इतिहास
निकलने वाला गुलाबी: कस्मेटिक वा चिकित्सा समस्या?
Chamomile चिया - हर्बल लाभ
एक बिल्ली को बच्चा सही कसरी नुहाउने गर्न?
म Windows XP emulator किन चाहिन्छ
लेमन cupcakes - एक 'पातलो' मीठो दाँत लागि नुस्खा